kismayo Cup Oo Guul Ku Dhamaaday
Waxaa magaaladda Kismayu ku soo gabagaboobay koobkii loo dhigay shanta xaafadood ee magaaladda Kismayu. Koobkan ayaa waxaa dhiirigeliyey GOS oo ay madaxdoodu ka soo qaybgashay furitaanka ciyaarahan isla markaasna ay keeneen qalabkii looga qaybgali lahaa tartankan. Tartankan wuxuu xusuus ku reebay dadweynaha ku dhaqan magaaladda Kismayu iyo tuulooyinka ku xeeran.
Ciyaartii FINAL ka ayaa waxaa madaxa isdaray labadda xaafadood ee FAANOOLE iyo GUULWADE. Wakhtigii caadiga ahaa waxay ciyaartu ku soo gabagabowday 1-1 barbar dhac ah waxaana la isla aaday rigoorayaal ay 4-2 ay guushu ku raacday xaafadda GUULWADE. HAMBALYO..HAMBALYO..GUULWADE.
Intii ay ciyaarahan socdeen ayaa waxaa si joogta ah ugaga soo qaybgalayey madaxda Jubaland iyo guddiga ganacsatadda Jubaland. Waxaa iyagana si joogta ah min bilow ilaa dhammaad talo iyo tusaalaba la garabtaagnaa madaxda guddiga qurba-joogta ee sports ka oo ay wakiil ka ahaayeen Xoghaye Mohamud Yare iyo Afhayeenka Abdi Xaaq iyo waliba Dr. Abdisamed Haji Abikar oo isagu ah dhakhtarka isbitaalka Kismayu. Waxaan sinaba loo hilmaameyn madaxdii degmadda Kismayu iyo waliba Governor Gooni oo dhiiri galin badan la garab taagnaa intii uu tartankani socday.
Waxaa amaan badan mudan guddoomiyayaasha, xoghayayaasha, iyo madaxda kale ee sports ee heer degmo iyo heer gobolba sida Burhan Kukuyo, Timo-Jilic, Biibaye, iyo rage kale ee garbahooda ah.